အပြစ်ဟုမထင်သောအပြစ်များ - အတင်းပြောခြင်း Gossip . Rev Ivan
ကျမ်ပိုဒ် သုတ္တံ ၂၀:၁၉ Proverbs 20:19
ပွဲတော်မင်္ဂလာကို ဖြေးညှင်းစွာ ခရစ်တော် အသား အသွေး ပေးဆပ်သွားကြောင်း အောက်မေ့သတိရခြင်း အင်းတော်က ဦဆောင်သွားပါပြီ။
အတင်းပြောခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုရင် လောက ဒစ်ရှင်နရီမှာတော့ Others' Private life , talk unkind, disapproving, or not true, fault statement words. တဖက်လူကို မစာမနာ မသေချာ မဟုတ်မမှန် စကားတွေနဲ့ ပြောဆိုခြင်း လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖေ့ဘွတ် လိုမျိုးနဲ့ တင်ရေးထားရင် တဖက်လူ မခုခံနိုင်ပဲ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်မှာတော့ Gossip = Slander, Wispering, Backbiting. Backstabing, Telebearing လို့ရေးထားပါတယ် (see photo). အတင်းပြောခြင်းဆိုတာ နောက်ကွယ်မှာပြောတာထက် ဆိုးတဲ့ နောက်ကျောဒါးနဲ့ထိုးခြင်း အထိ ပါပါတယ်။
အတင်းပြော အပုပ်ချခြင်းများ မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ရာထူး သြဇာရှိလာလေ ပိုအပြောခံရလေပါပဲ။
လူတွေ ရှောင်ဖို့ခက်တဲ့ အခြေနေမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ပျော်ပါး နောက်ပြောင်ခြင်းများ။ ရင်းနှီးတဲ့ မိဘမောင်နှမများမှာ မကြာခဏ အပြောမတတ်လို့ ဆိုးဝါးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် အတွင်းရေးတွေကို ရှယ်ခြင်းကလဲ မြင့်မြတ်သူများ မလုပ်သင့်ပါ။
လည်၍စကားများစွာ ပြောတတ်သောသူသည် လျို့ဝှက်သောအရာကို ဖေါ်ပြတတ်သည်။ သစ္စာစောင့်သောသူမူကား ဝှက်ထားတတ်သည် (သုတ္တံ ၁၁:၁၃) ရေးထားပါတယ်။
ကာကွယ်နည်းလမ်းတွေက အတင်းပြောတဲ့ အုပ်စု သို့ဟုတ် လူတယောက် တတ်နိုင်ရင် ရှောင်ထွက်သွားပါ။ ရင်နှီးတဲ့ မတ်ဆွေများ အုပ်စု ထဲမှာဆိုရင် ရှောင်ထွက်မရတော့ပါ။ ငြိမ်နေရင်လဲ ဝန်ခံ သဘောတူ သတ်မှတ်ခံရပါမယ်။ ဖြေးညှင်းစွာနဲ့ မိမိလက်အခံနိုကြောင်း ပြောပြရပါမယ်။
သခင်ယေရှု ဟေရှာယ ၅၃ မှာတော့ မတရားစွတ်စွဲမှုတွေ လက်ဝါကပ်တိုင်တင်သတ်ခြင်းကို ခံရပါတယ်။ သူ့ တပည့်တော် ယုဒရှကာရုတ် သစ္စာဖောက်ခြင်း ခံရပြီ ရိုက်ပုတ်ညှင်းဆဲ အဝတ်စည်ချည်း ကားတိုင်ပေါ် တင်သတ်ခြင်း ခံရပါတယ်။ ဒါက ဘုရားသခင် အလိုတော်ပါ။ သေခြင်းတဖက်မှာ ကောင်းကင်ဘုံ အဖထံသွားဖို့ ရှင်ပြန်ထမြောက် ပြပါတယ်။
၁၅နှစ်ကြာခဲ့ပေမဲ့ သူတို့ကို ခွင့်လွှတ်သော်လည်း အခုထိအောင် မမေ့နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ။
ကျနော် လောကအလုပ်က အပြီးထွက်ပြီ အချိန်ပြည့် အမှုတော်ဆောင်ဖို့ ကျမ်းစာကျောင်းတက်မယ့် အချိန် မထင်မှတ်တဲ့ သူငယ်ခြင်း၂ယေက်က အတင်းပြော တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ပြီး အလူးအလဲ ခံခဲ့ရပါတယ်။
စကားပြောရာမှာ အတင်းပြောတာမျိုး ရှောင်ဖို့ ပြောရာမှာ Strength/ Weakness ဆိုတဲ့ သူရဲ့ အားသာချက် နဲ့ အားနည်းချက် ၂မျိုးစလုံးကို နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီ ပြောတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
သီချင်ဆို ချီမွမ်းပြီး ဆုတောင်း ကောင်ကြီးပေး အဆုံးသပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ဘုရားသခင် ကောင်ကြီးပေးပါစေ။
1. What gossip is and what it isn't.
2. God hate gossip for good reason.
3. Anger zone for gossiping.
4. Handling gossip around us
Sermon Series on RespectableSins: GOSSIP 1 Nov 2015